Fandravana antenimiera :: Hiaro ny sezany ireo Loholona • AoRaha
Fandravana antenimiera Hiaro ny sezany ireo Loholona
Miahiahy amin’ny ho aviny. Mangatsiatsiaka tsy toy ny mahazatra ny fivoriana tsy ara-potoanan’ireo Loholona etsy amin’ny lapan’Anosikely. Araka ny fantatra dia manomboka miteraka adihevitra eo amin’ireo samy Loholona ny fikasana handrava an’ity andrimpanjakana ity. Voalaza fa maro amin’izy ireo no mitaky ny hampidirana ao anatin’ ny lahadinika an’io teboka io eny an-toerana amin’izao fivoriana tsy ara-potoana farany izao.
« Hojerena ao anatin’izany ny lalàna mifehy ny Antenimierandoholona sy izay voalazan’ny Lalàm-panorenana. Raha ny tokony ho izy dia amin’ny taona 2020 vao ho tapitra ny fe-potoam-piasan’ny loholona », hoy ny iray amin’ireo loholona nivory teny Anosikely, omaly.
Nandritra ny kabary fanokafana ny fivoriana no efa nanatsidihan’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, ny amin’ny tokony hisian’ny firaisan-kina sy fiaraha-miasa eo amin’ireo hery pôlitika samihafa eto Madagasikara. Nofariparitany ny maha zava-dehibe ny andraikitra sahanin’ity andrimpanjakana ity.
Finoana sy fankalazana Hitsena ny fetin’ny Paska any an-tokantrano ireo mpino
Fahatsapan-tena no andrasana